Nucleus ၌ osFosB ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသည်သဘာဝဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်သောအပြုအမူများအပေါ်တွင်မူတည်နေသည်။
မှတ်ချက်များ Delta FosB သည်စွဲလမ်းမှု၏အဓိကမော်လီကျူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စွဲလမ်းမှုဖြစ်စဉ်အတွင်း၌စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူနှင့် ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ ဒါဟာစွဲဓာတုသို့မဟုတ်အပြုအမူရှိမရှိမြင့်တက်။ ဒီလေ့လာမှုကလိင်လှုပ်ရှားမှုနှင့်သကြားဓာတ်သုံးစွဲမှုတို့တွင်စုဆောင်းနေကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သုတေသီများကလည်းလိင်မှုကိစ္စသည်သကြားစားသုံးမှုကိုတိုးစေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Delta FosB သည်အခြားစွဲလမ်းမှုကိုအားဖြည့်စေသောစွဲလမ်းမှုတစ်ခုတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ မေးခွန်းမှာ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစားသုံးခြင်းသည် Delta FosB အပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသနည်း။ DeltaFosB တွင်ထိုးနှက်သော dopamine သည်သင်တို့၏ ဦး နှောက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
အပြည့်အဝလေ့လာမှု: အပြုအမူ Related သဘာဝဆုကြေးပေါ်တွင်နျူကလိယ Accumbens အတွက်ΔFosB၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု
J ကို neuroscience ။ 2008 အောက်တိုဘာလ 8; 28 (41): 10272-10277 ။
Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.1531-08.2008 ။
Deanna L ကို Wallace1,2, ဗင်းဆင့် Vialou1,2, Loretta Rios1,2, Tiffany အယ်လ် Carl-Florence1,2, Sumana Chakravarty1,2, Arvind Kumar1,2, ဒန်ယဲလ်အယ်လ် Graham1,2, သောမတ်စ်အေ Green1,2, အန်း Kirk1,2, ဆာဂျီယိုဃIñiguez3, လင်ဒါဗြဲ Perrotti1,2,4, မိုက်ကယ် Barrot1,2,5, Ralph ဂျေ DiLeone1,2,6 အဲရစ်ဂျေ Nestler1,2 နှင့်ကားလို့စ်အေBolaños-Guzmán1,2,3 +
DL Wallace ၏လက်ရှိလိပ်စာ - Helen Willis အာရုံကြောသိပ္ပံဌာန၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်၊ ဘာကလေ၊ ဘာကလေ၊ CA ၉၄၇၂ ။
TL Carle-Florence ၏လက်ရှိလိပ်စာ - Mary Kay Research Laboratories, Dallas, TX 75379 ။
DL ဂရေဟမ်၏လက်ရှိလိပ်စာ - ဘော်စတွန် Merck Laboratories၊ MA 02115
TA Green ၏လက်ရှိလိပ်စာ - ဗာဂျီးနီးယားဓနသဟာယတက္ကသိုလ်၊ Richmond, VA ၂၃၂၈၄ ။
EJ Nestler ၏လက်ရှိလိပ်စာ - နယူးယောက်၊ နယူးယောက်၊ အာရုံကြောသိပ္ပံဌာန၊ သိနာတောင်ဆေးကျောင်း၊ နယူးယောက်၊
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှနာတာရှည်ထိတွေ့မှုအားဖြင့်နျူကလိယ accumbens (NAc) တွင်သွေးဆောင်အဆိုပါကူးယူအချက် deltaFosB (ΔFosB), ဤမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုမှထိခိုက်တုံ့ပြန်မှုပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ပြသလျက်ရှိသည်။ သို့သော်လျော့နည်းသည့်သဘာဝဆုလာဘ်မှတုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းညှိအတွက်ΔFosBများအတွက်အခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုအစွမ်းထက်သဘာဝကဆုလာဘ်အပြုအမူတွေ, sucrose အရက်သောက်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, အ NAc အတွက်ΔFosB၏တိုးအဆင့်ဆင့်ကြောင့်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ထို့နောက်ထိုကဲ့သို့သောΔFosBသော induction အဆိုပါသဘာဆုလာဘ်မှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုသြဇာလွှမ်းမိုးပုံကိုလေ့လာဖို့ဗိုင်းရပ်စ်-mediated ဗီဇလွှဲပြောင်းကိုအသုံးပြုပါ။ ကျနော်တို့ NAc အတွက်ΔFosB၏ overexpression sucrose စားသုံးမှုတိုးပွါးခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ရှုထောင့်ကိုအားပေးအားမြှောက်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ပြပွဲ sucrose စားသုံးမှုအတွက်တိုးကိုပြသလည်း, ΔFosBအဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ပေးသောယခင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ, အတူတိရိစ္ဆာန်များကဖော်ပြသည်။ ဤလုပ်ငန်းကိုΔFosBအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအသုံးပြုပုံဒါပေမယ့်လည်းသဘာဝအကြိုးလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် NAc အတွက်သွေးဆောင်သည်ကိုမသာကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက် NAc အတွက်ΔFosBသွေးဆောင်ကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုမှနာတာရှည်ထိတွေ့မှုကအခြားသဘာဝကဆုလာဘ်များစားသုံးမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်ကိုပြသပါ။
ΔFosBတစ် Fos မိသားစုကူးယူအချက်သည် fosB ဗီဇ (Nakabeppu နှင့် Nathan, 1991) ၏ခြင်းကိုထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာစူးရှသောလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်အခြား Fos မိသားစုပရိုတိန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါအတော်လေးနိမ့်အဆင့်ရှိပါကြောင်း, ဒါပေမယ့်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့တည်ငြိမ်မှု (Nestler, 2008) ၏နာတာရှည်ဆွပြီးနောက်ဦးနှောက်ထဲမှာမြင့်မားဖို့စုဆောင်းနေပါတယ်။ ဤသည်စုဆောင်းခြင်း 2002 ([ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, Cenci တွေ့မြင်အလွဲသုံးစားမှု, သိမ်းယူမှု, လက္ခဏာမူးယစ်ဆေးဝါး, antipsychotic မူးယစ်ဆေးဝါး, အာရုံခံတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများအများအပြားအမျိုးအစားမူးယစ်ဆေးများနာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးအပါအဝင်နာတာရှည်ဆွများစွာသောအမျိုးအစားများ, တုန့်ပြန်နေတဲ့ဒေသ-တိကျတဲ့ထုံးစံ၌ဖြစ်ပေါ် ) နှင့် Nestler (2008)] ။
osFosB သော induction ၏လုပ်ဆောင်မှုအကျိုးဆက်များကိုနျူကလိယ accumbens (NAc) တွင်ပရိုတိန်းများဖြစ်ပေါ်စေသောအလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများအတွက်အကောင်းဆုံးနားလည်သည်။ အလွဲသုံးစားမှုအမျိုးအစားအားလုံးနီးပါး (Muller and Unterwald, 2005; McDaid et al) ။ , 2006; Nestler, 2008; ။ Perrotti et al, 2008) ။ NAc သည် ventral striatum ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုအတွက်အကျိုးပြုသည့်အရေးကြီးသောအာရုံကြောအလွှာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်တိုးပွားလာသောသက်သေအထောက်အထားများအရဤဒေသတွင် osFosB ကိုထိတွေ့ခြင်းသည်တိရိစ္ဆာန်များအားအလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုမိုထိရောက်စေပြီး၎င်းတို့ကိုရရှိရန်လှုံ့ဆော်မှုကိုလည်းတိုးမြှင့်နိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် NAc တွင် osFosB ၏အလွန်အကျွံထုတ်ဖော်မှုကြောင့်တိရိစ္ဆာန်များသည်ကိုကင်း (သို့) မော်ဖင်းအကိုက်သို့ ဦး စားပေးရွေးချယ်ခြင်းသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနည်းစဉ်တွင်မိမိကိုယ်ကိုစီမံသောကိုကင်းကိုပိုမိုနှစ်သက်စေသည်။ (ကိုဇက် et al ။ , 1999) ; ။ Colby et al, 2003; Zachariou et al, 2006) ။
မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်ဖြန်ဖြေအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍမှထို့အပြင် NAc သဘာဝကဆုလာဘ်မှတုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းညှိ်ပတ်သက်နေလျက်ရှိသည်နှင့်မကြာသေးမီအလုပ်အဖြစ်ကောင်းစွာသဘာဝကဆုလာဘ်များနှင့်ΔFosBအကြားဆက်ဆံရေးအကြံပြုထားသည်။ မိမိဆန္ဒအလျောက်ဘီးပြေးအဆိုပါ NAc အတွက်ΔFosBအဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ပြသခဲ့ပြီး, ဤဦးနှောက်ဒေသအတွင်းΔFosB၏ overexpression အဘယ်သူ၏အပြေးကုန်းပြင်2ရက်သတ္တပတ်ကျော် (Werme et al ထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်လျှင်ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာဘို့ကြာရှည်ခံရာပြေးတစ်ဦးမှန်မှန်တိုးဖြစ်ပေါ်စေသည် ။ , 2002) ။ အလားတူပင် high-အဆီဓာတ်စာအစားအစာကိုဆုလာဘ် (Olausson et al ။ , 2007) အတွက်တုံ့ပြန်ဆာဤဒေသတွင်တိုးမြှင့်အတွက်ΔFosB overexpression သော်လည်း, ထို NAc (Teegarden နှင့်ဘေးလ်, 2006) တွင်ΔFosBဖြစ်ပေါ်သည်။ ထို့အပြင်အဆိုပါ fosB ဗီဇမိခင်အပြုအမူ (ဘရောင်း et al ။ , 1996) တွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်။ သို့သျောလညျးအနညျးငယျသတင်းအချက်အလက်ΔFosBနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, အင်အားအကောင်းဆုံးသဘာဝကဆုလာဘ်တစ်ဦးအကြားဆက်ဆံရေးအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အပွငျလျော့နည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနေဆဲသဘာဝကဆုလာဘ်အပြုအမူပို compulsive ပင် "စွဲလမ်း," မော်ဒယ်များအတွက်ΔFosBရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေပါဝင်ပတ်သက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အတော်ကြာအစီရင်ခံစာများ sucrose စားသုံးမှု Paradigm (Avena et al ။ , 2008) တွင်တစ်ခုစွဲတူသောအသှငျအပွငျသရုပ်ပြပါပြီ။
သဘာဝကဆုလာဘ်အပြုအမူတွေအတွက်ΔFosBအရေးယူကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာတိုးချဲ့ဖို့ကျနော်တို့ sucrose အရက်သောက်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမော်ဒယ်များအတွက် NAc အတွက်ΔFosB၏ induction စုံစမ်းစစ်ဆေး။ ကျနော်တို့ကိုလည်း NAc အတွက်ΔFosB၏ overexpression အဆိုပါသဘာဆုလာဘ်မှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုကိုအထူးပြုနှင့်တဦးတည်းကသဘာဝဆုလာဘ်မှယခင်ထိတွေ့မှုကအခြားသဘာဝအကြိုးအပြုအမူတွေကိုမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်ရှိမရှိဘယ်လိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီ။
အားလုံးတိရစ္ဆာန်အလုပျထုံးလုပျနညျးတက္ကသိုလ်တက္ကဆက်ပြည်နယ်၏အနောက်တောင်ပိုင်း Medical Center မှများ၏ Institutional တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
လိင်ကြုံတွေ့အထီး Sprague Dawley ကြွက် (ချားလ်စ်မြစ်) တစ်ပတ်ကို ~1-2 ကြိမ် 8 အစည်းအဝေးများတစ်ဦးစုစုပေါင်း 10-14 ရက်သတ္တပတ်အဘို့, သူတို့ကိုသုတ်ရည်လွှတ်သည်အထိလက်ခံအမျိုးသမီးနှင့်အတူမိတ်ရန်ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်ထုတ်ပေးခဲ့ကြသည်။ ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (Barrot et al ။ , 2005) အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ထိန်းချုပ်ရေးအထီးကြုံတွေ့ယောက်ျားအဖြစ်, အချိန်၏တူညီသောငွေပမာဏအဘို့, တူညီတဲ့နယ်ပယ်တွင်နှင့်အိပ်ယာမှထိတွေ့မှုကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသမီးသည်ဤထိန်းချုပ်မှုယောက်ျားနှင့်အတူနယ်ပယ်မှမိတ်ဆက်ဘယ်တော့မှခဲ့ကြသည်။ သီးခြားစမ်းသပ်မှုများတွင်တစ်ဦးအပိုဆောင်းစမ်းသပ်အုပ်စုတစ်စုထုတ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်: အထီးသေး estrus ထဲသို့ဝင်မရဖူးတဲ့ဟော်မုန်း-ကုသအမျိုးသမီးမှမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားယောက်ျားတောင်ပေါ်နှင့် intromissions ကြိုးစားခဲ့; အမျိုးသမီး nonreceptive ကြောင့်သို့သော်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသည်ဤအုပ်စုတွင်အောင်မြင်မခံခဲ့ရပါဘူး။ တဆယ်ရှစ်နာရီနောက်ဆုံး session တစ်ခုအပြီး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် perfused သို့မဟုတ်ခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံနှင့်ဦးနှောက်တစ်သျှူးအပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့သိမ်းယူကြ၏။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့တိရစ္ဆာန်များ၏အခြားအုပ်စုတစ်စုသည် 5th session တစ်ခုပြီးနောက် ~14 ဃအဘို့, sucrose preference ကိုစမျးသပျခဲ့သညျ။ နောက်ထပ်အသေးစိတ်အတွက် (ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းအဖြစ် www.jneurosci.org မှာရှိနိုင်ပါ) ဖြည့်စွက်နည်းလမ်းများကြည့်ပါ။
sucrose ပြင်းအား (1-2%) ကိုတိုးမြှင့်မှာ2ဃများအတွက်ရေနှင့် sucrose ၏တစ်ဦးချင်းစီကိုပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှု (ပုံ။ 0.125a) ခုနှစ်, ကြွက်, 50 ဃများအတွက်ရေနှစ်ပုလင်းမှန့်အသတ် access ကိုပေးခဲ့တဦးတည်းပုလင်းအားဖြင့်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။ ရေနှစ်ပုလင်းတစ်6ဃကာလတစ်ဦးတည်းသာရေပုလင်းနှင့် 2% sucrose တစ်ပုလင်း၏ 0.125 ဃထို့နောက်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။ ဒုတိယစမ်းသပ်ချက် (သင်္ဘောသဖန်းသီး။ 1b, က c, 2) ခုနှစ်, ကြွက်တဦးတည်းပုလင်းမှန့်အသတ် access ကို 10 ဃဘို့ရေကိုတစ်ဦးချင်းစီနှင့် 10% sucrose ပေးထားခဲ့ကြသည်။ ထိန်းချုပ်ရေးတိရိစ္ဆာန်များသာရေနှစ်ပုလင်းကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ တိရစ္ဆာန်များ perfused သို့မဟုတ်လျှင်မြန်စွာခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံနှင့်ဦးနှောက်တစ်သျှူးအပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့ကောက်ယူကြ၏။
တစ်ဦးက Two-ပုလင်းရွေးချယ်မှုပါရာဒိုင်းယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ကောက်ယူခဲ့သည် (Barrot et al ။ , 2002) ။ ခွဲစိတ်မီ, ဖြစ်နိုင်သမျှတစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုအဘို့ကိုထိန်းချုပ်ရန်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရေနှင့် 30% sucrose အကြားနှစ်ပုလင်းရွေးချယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဘို့မှောင်မိုက်အဆင့်၏ပထမဦးဆုံး 1 မိစဉ်အတွင်း pretested ခဲ့ကြသည်။ သုံးဗိုင်းရပ်စ်-mediated ဗီဇလွှဲပြောင်းပြီးနောက်ရက်သတ္တပတ် (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) နှင့်မည်သည့်အပိုဆောင်းအမူအကျင့်စမ်းသပ်မီ, ရေကိုသာပေးတော်မူသောတိရိစ္ဆာန်များထို့နောက်ရေနှင့် 30% sucrose ဖြေရှင်းချက်များအကြားတစ်ဦး 1 မိ Two-ပုလင်းရွေးချယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။
လိင်အတွေ့အကြုံရှိနှင့်ထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမပြုမီ pretest လုပ်ထုံးလုပ်နည်းရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ငါးရက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ (သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှု) အပြုအမူများ၏ 14th session တစ်ခုပြီးနောက်, တိရိစ္ဆာန်များရေနှင့်၎င်းတို့၏မှောင်မိုက်-အလင်းသံသရာ၏ပထမဦးဆုံး 1 မိနေစဉ်အတွင်းတစ် 30% sucrose ဖြေရှင်းချက်များအကြားနှစ်ပုလင်းရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်ပေးခဲ့သည်။ လိင်အတွေ့အကြုံရှိနှင့်ထိန်းချုပ်မှုတိရစ္ဆာန်များ၏သီးခြားအဖွဲ့များကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပြီးနောက်ΔFosBအဆင့်ဆင့်တိုင်းတာဘို့နှင့် sucrose preference ကိုအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာနေဘို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
NAc ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့လာကြတယ်ခှဲစိတျဖြင့်ရရှိသောခှဲစိတျအနောက်တိုင်းချေအားဖြင့်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည် (Perrotti et al ။ , 2004), Perrotti et al တွေ့မြင်, antibody ကိုစရိုက်လက္ခဏာတွေများအတွက် [တဲ့ယုန် polyclonal Anti-FosB antibody ကိုသုံးနိုင်သည်။ (2004)] နှင့် glyceraldehyde-3-ဖော့စဖိတ် dehydrogenase (GAPDH) (RDI-TRK5G4-6C5; သုတေသနရှာဖွေရေး) အားတစ်ဦး monoclonal antibody ကိုတစ်ထိန်းချုပ်မှုပရိုတိန်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သော။ ΔFosBပရိုတိန်းပါဝင်မှုနှုန်း GAPDH မှပုံမှန် ဖြစ်. , စမ်းသပ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုနမူနာနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ နောက်ထပ်အသေးစိတ်အတွက် (ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းအဖြစ် www.jneurosci.org မှာရှိနိုင်ပါ) ဖြည့်စွက်နည်းလမ်းများကြည့်ပါ။
(Perrotti et al ။ , 2005) တိရစ္ဆာန်များ perfused ဖြစ်. , ဦးနှောက်တစ်ရှူးထုတ်ဝေ immunohistochemistry နည်းလမ်းများ အသုံးပြု. ကုသခံခဲ့ရသည်။ ကြိုးလှုံ့ဆော်မှုဖို့နောက်ဆုံးထိတွေ့ဆန်းစစ်မတိုင်မီ 18-24 ဇဖြစ်ပွားခဲ့သည်သောကြောင့်, ကျွန်တော်တစ်ဦးဒယ်အိုး-FosB antibody ကိုနှင့်အတူရှာဖွေတွေ့ရှိ, ရှိသမျှ FosB ကဲ့သို့ immunoreactivity စဉ်းစား (SC-48; Santa Cruz ဇီဝနည်းပညာ) ။ , ΔFosB (Perrotti et al ထင်ဟပ်ဖို့, 2004 , 2005) ။ နောက်ထပ်အသေးစိတ်အတွက် (ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းအဖြစ် www.jneurosci.org မှာရှိနိုင်ပါ) ဖြည့်စွက်နည်းလမ်းများကြည့်ပါ။
ခွဲစိတ်ကုသအထီး Sprague Dawley ကြွက်အပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ Adeno-ဆက်စပ်ဗိုင်းရပ် (AAV) virus သယ်ဆောင်မြန်မာနိုင်ငံသထိုးသွင်းခဲ့ကြသည်ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့, 1.5 အဆိုပါ NAc သို့ခြမ်းနှုန်း (Barrot et al ။ , 2005) μl။ မှန်ကန်သောနေရာချထား 40 μm cresyl-ခရမ်းရောင်-စွန်းကဏ္ဍများအပေါ်စမ်းသပ်ချက်အပြီးမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ Vector (။ Zachary et al 2006) သာအစိမ်းရောင်ချောင်းပရိုတိန်း (GFP) (AAV-GFP) သို့မဟုတ်ရိုင်း-type အမျိုးအစားΔFosBနှင့် GFP (AAV-ΔFosB) ဖော်ပြထားတဲ့ AAV ဖော်ပြတဲ့ထိန်းချုပ်မှုပါဝင်သည်။ Transgene စကားရပ် (Zachary et al ။ , 3) အကျယ်ချဲ့ဖြစ်ပါတယ်အခါ NAc အတွင်း Transgene စကားရပ်၏အချိန်သင်တန်းအပေါ်အခြေခံပြီး, တိရစ္ဆာန်များ, AAV virus သယ်ဆောင်၏ဆေးထိုးပြီးနောက်အပြုအမူ 4-2006 ပတ်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ နောက်ထပ်အသေးစိတ်အတွက် (ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းအဖြစ် www.jneurosci.org မှာရှိနိုင်ပါ) ဖြည့်စွက်နည်းလမ်းများကြည့်ပါ။
ထူးခြားမှုကိုအချက်နှစ်ချက်ပါသောထပ်ခါတလဲလဲတိုင်းတာသည့် ANOVAs နှင့်ကျောင်းသား၏ t စစ်ဆေးမှုများကို အသုံးပြု၍ နှိုင်းယှဉ်ချက်များစွာအတွက်မှတ်ချက်ချခဲ့သည်။ ဒေတာ SEM ±နည်းလမ်းအဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ စာရင်းအင်းအရေးပါမှုကို p <0.05 အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။
sucrose သွေးဆောင်ဖို့နာတာရှည်ထိတွေ့ sucrose စားသုံးမှုအရေးကြီးတဲ့ကဲ့သို့သောအပြုအမူတိုးလာ
ကျနော်တို့ sucrose များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ရေနှစ်ပုလင်း၏2ဃပြီးနောက်တိုင်း2ဃနှစ်ဆတိုးခဲ့သည့်အတွက်နှစ်ပုလင်းရွေးချယ်မှုပါရာဒိုင်းအကောင်အထည်ဖော်။ အဆိုပါ sucrose အာရုံစူးစိုက်မှု 0.125% မှာစတင်% 50 မှတိုးတက်လာခဲ့သည်။ တိရစ္ဆာန်များ 0.25% sucrose သည်အထိတစ် sucrose preference ကိုပြသ, ပြီးတော့အားလုံးပိုမိုမြင့်မားပြင်းအားမှာရေထက်ပိုမို sucrose သောက်ဘဲနေ၏။ အဆိုပါ 0.25% အာရုံစူးစိုက်မှုမှာစတင်ခြင်း, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အများဆုံး sucrose အသံအတိုးအကျယ်5နှင့် 10% မှာရောက်ရှိခဲ့ပါသည်သည်အထိ sucrose ၏တိုးပွားလာ volumes ကိုသောက်၏။ 20% နှင့်ပိုမိုမြင့်မားမှာပါ, သူတို့ကစုစုပေါင်း sucrose စားသုံးမှု (ပုံ။ 1a, inset) ၏တည်ငြိမ်အဆင့်ဆင့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့သူတို့ရဲ့ sucrose အသံအတိုးအကျယ်ကိုလျော့ချဖို့စတင်ခဲ့သည်။ ဒီပါရာဒိုင်းပြီးနောက်တိရိစ္ဆာန်များသာရေနှစ်ပုလင်းနှင့်အတူ6ဃသုံးစွဲ, ပြီးတော့ 0.125 ဃများအတွက် 2% sucrose ပုလင်းသို့မဟုတ်ရေတစ်ရွေးချယ်မှုနှင့်အတူတင်ပြခဲ့ကြသည်။ တိရိစ္ဆာန်များကဒီအာရုံစူးစိုက်မှုမှာရေထက်ပိုမို sucrose သောက်, နေ့ 1 ပေါ်မှာဤ sucrose အာရုံစူးစိုက်မှုမှကနဦးထိတွေ့မှုအပြီးလေ့လာတွေ့ရှိ preference ကို၏မရှိခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါသိသိသာသာ sucrose preference ကိုပြ။
ပုလင်းနှစ်ချောင်းရွေးချယ်နိုင်သောပါရာဒိုင်းများသည်သကြားဓာတ်စားသုံးမှုမြင့်တက်လာမှုကိုပြသသည်။ က, သန္ဓေသား၏အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးပွားလာ "inverted U- ပုံသဏ္ ”ာန်" စားသုံးမှုအပြုအမူနှင့်အတူပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခြင်းနှင့်တူသောဆုတ်ခွာသည့်ကာလအပြီး sensitization-like အပြုအမူ [2% ၏တစ် ဦး ချင်းစီအာရုံစူးစိုက်မှုမှာ 0.25 per ရေနှင့် sucrose စားသုံးမှုအကြားသိသိသာသာခြားနားချက်နှင့် နောက်ဆက်တွဲ sucrose ထိတွေ့မှု (t (30) = 4.81; p <0.001; မျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်များအတွက်တညျ့ compar = 8)] ။ Inset, Intake သည်စုစုပေါင်းသကြားဓာတ်၏ဂရမ်ကို ၂ ဒီဂရီကျော်အတွင်းတစ်ဝက်စီတွင်မျိုချမိသောကြောင့်မြင့်မားသောပြင်းအားတွင်တည်ငြိမ်သောစားသုံးမှုကိုညွှန်ပြသည်။ ခ၊ နှစ်ပုလင်းရွေးချယ်မှုပါရာဒိုင်း ၁၀dရှိတိရိစ္ဆာန်များသည် ၁ ရက်အတွင်း sucrose စားသုံးမှုပမာဏတိုးပွားလာသည် (တစ်နေ့သာစားသုံးခြင်းကိုပြသသည်) Two-factor ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သော ANOVA သည်နေ့၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြခဲ့သည် (F (2) = 10; p <1), sucrose (F (3,27) = 42.3; p <0.001), နှင့် sucrose × day (F) (1,9) = 927.2; p <0.001; = = 3,27 / အုပ်စုတစ်စု) ။ ဂ, သွပ်ဓာတ်နှင့်ထိတွေ့မှုနှင့်အတူထိန်းချုပ်မှု (ရေသာ) တိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးလာ။ Two-factor ထပ်တလဲလဲတိုင်းတာသော ANOVA သည်နေ့၏သိသာထင်ရှားသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသသည် (F (44.8) = 0.001; p <10) အုပ်စုနှစ်ခုစလုံးသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအလေးချိန်များလာသည်နှင့် sucrose နှင့်နေ့တို့တွင်သိသိသာသာအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သည် (F (5,70) ) = 600; p <0.001; = = 5,70 / အုပ်စုတစ်စု), ထို sucrose အုပ်စုသည်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပိုပြီးအလေးချိန်ရရှိကြောင်းအကြံပြုသည်။
အများဆုံးအသံအတိုးအကျယ်စားသုံးမှုတစ် 10% အာရုံစူးစိုက်မှုမှာရောက်ရှိခဲ့ပါသည်သောကြောင့်, နုံတိရိစ္ဆာန်များ 10 ဃဘို့ရေကိုတစ်ဦးပုလင်းနှင့် 10% sucrose များထဲမှပုလင်းအကြားရွေးချယ်မှုပေးထားသောနှင့်ရေကိုသာနှစ်ခုပုလင်းပေးထားတဲ့ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ရက် 10 (ပုံ။ 1b) က sucrose စားသုံးမှု၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းမှ built Sucrose တိရိစ္ဆာန်များ။ သူတို့ကအစအလေးချိန်ရှိအခြားနားချက်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတိုးပွားလာအတူထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါဆက်လက် sucrose ထိတွေ့ပြီးနောက်သိသိသာသာပိုပြီးအလေးချိန်ရရှိခဲ့ (ပုံ။ 1c) ။
Sucrose အရက်သောက်ယင်း NAc အတွက်ΔFosBအဆင့်ဆင့်တိုးပွါး
ကျနော်တို့ (ပုံ။ 10a) blotting အနောက်တိုင်းအသုံးပြုမှုနှင့် immunohistochemistry (ပုံ။ 2b) အားဖြင့် NAc အတွက်ΔFosB၏အဆင့်ဆင့်များအတွက် 2% sucrose ပါရာဒိုင်းပေါ်ဤအကြောင်းတိရိစ္ဆာန်များခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ နှစ်ဦးစလုံးနည်းလမ်းများထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ sucrose အတွေ့အကြုံရ၌ဤဦးနှောက်ဒေသတွင်း၌ΔFosBပရိုတိန်း၏ induction ဖော်ပြခဲ့တယ်။ တစ်ခုလုံးကိုΔFosBပရိုတိန်း sequence ကို Full-အရှည် FosB ၏အတွင်းပါရှိသောကြောင့်, FosB ကဲ့သို့ immunoreactivity detect ဖို့အသုံးပြုပဋိနှစ်ဦးစလုံးပရိုတိန်း (Perrotti et al ။ , 2004, 2005) ကိုအသိအမှတ်မပြု။ သို့သော်အနောက်တိုင်းချေသာΔFosBသိသိသာသာ sucrose အရက်သောက်ခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်ခဲ့ကွောငျးဖျောပွထားပါ။ ဤသည် immunohistochemistry နေဖြင့်လေ့လာတွေ့ရှိ signal ကိုအတွက်ခြားနားချက်ΔFosBကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းဖော်ပြသည်။ ပုံ 2b အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာအဆိုပါတိုးလာသည့် NAc core နဲ့ shell ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပေမယ် (Data ပြမဟုတ်) striatum dorsal မခံခဲ့ရပါဘူး။
sucrose စားသုံးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ NAc အတွက် osFosB စကားရပ်တိုးမြှင့်။ တစ် ဦး, နှစ် ဦး - ပုလင်းရွေးချယ်မှုပါရာဒိုင်းအတွက် 10% sucrose ၏နာတာရှည်စားသုံးမှုအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, အနောက်တိုင်းချေခြင်းဖြင့် NAc အတွက်ΔFosBစကားရပ်တိုးမြှင့် (sucrose, t (11) = 2.685; * p = 0.021; n = 5- 8; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, t ကို (12) = 2.351; * p = 0.037; n = 6-8) ။ Olfaction ကိုထိန်းချုပ်သောယောက်ျားများသည်ထိန်းချုပ်မှုမရှိသောယောက်ျားများနှင့်မတူပါ။ (t (10) = 0.69; p> 0.50; n = 4-8) NS, ထူးခြား။ ခ, sucrose အတွေ့အကြုံတိရိစ္ဆာန်များမှ ဦး နှောက်ကဏ္sectionsများ immunohistochemistry အားဖြင့် NAc အတွက်ထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် osFosB immunoreactivity တိုးမြှင့်ပြသပါ။ ရုပ်ပုံများ (10 ×) သည်ကုသမှုအုပ်စုတစ်ခုစီရှိကြွက်ခြောက်ကောင်မှ ဦး နှောက်အပိုင်းအမျိုးမျိုးကိုကိုယ်စားပြုသည်။ AC, anterior commissure ။ c) လိင်အတွေ့အကြုံရှိသောတိရိစ္ဆာန်များမှ ဦး နှောက်ကဏ္sectionsများသည် immunoshostochemistry မှ NAc ရှိ counterparts တွေကိုနှိုင်းယှဉ် BFosB immunoreactivity တိုးလာသည်ကိုပြသည်။ ရုပ်ပုံများ (10 ×) သည်အုပ်စုတစ်ခုစီတွင်ကြွက်ခြောက်ကောင်မှရှစ်ကောင်မှ ဦး နှောက်အပိုင်းအမျိုးမျိုးကိုကိုယ်စားပြုသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဟာ NAc အတွက်ΔFosBအဆင့်ဆင့်တိုးပွါး
ကျနော်တို့ဘေးနားရှိ NAc အတွက်ΔFosB၏ induction အပေါ်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများစုံစမ်းစစ်ဆေး။ လိင်ကြုံတွေ့အထီးကြွက်တစ်ဦး 14-8 တပတ်အချိန်ကာလအတွင်း 10 အစည်းအဝေးများအဘို့အသုတ်ရည်လွှတ်သည်အထိတစ်လက်ခံအမျိုးသမီးနှင့်အတူန့်အသတ် access ကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ အရေးကြီးတာက, ထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များ Home-လှောင်အိမ်ထိန်းချုပ်မှုမဟုတ်ကြပေမယ့်အစားစမ်းသပ်ခြင်းရက်ပေါင်းနှင့်အချိန်၏တူညီသောငွေပမာဏအဘို့ကားလက်ခံအမျိုးသမီးမှထိတွေ့မှုမပါဘဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်ထားတဲ့သုတ်ရည်ထိအတွက်ပွင့်လင်းသောလယ်နယ်ပယ်တွင်နှင့်အိပ်ယာမှထိတွေ့မှုအပေါ်အလားတူကိုင်တွယ်ခြင်းဖြင့်ထုတ်ပေးခဲ့မှုအတွက်ထိန်းချုပ် olfaction နှင့်ကိုင်တွယ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ အနောက်တိုင်းချေအသုံးပြုခြင်း, ငါတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကသိသိသာသာ FosB လေ့လာတွေ့ရှိ Full-အရှည်မရှိရှာဖွေ ထောက်လှမ်း. အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုသည် (ပုံ။ 2a), နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါΔFosB၏အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤအဒေတာတွေနဲ့ကိုက်ညီ, immunohistochemistry အဆိုပါ NAc (ပုံ။ 2c) ၏ core နဲ့ shell ကိုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ΔFosBအစွန်းအထင်းတစ်ခုတိုးထင်ရှားပေမယ့် (ဒေတာပြမပါ) striatum dorsal မဟုတ်ပါဘူး။
ΔFosBအတွက်တိုးလာသည့်လိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိကြောင်းသေချာစေရန်လူမှုရေးအပြန်အလှန်သို့မဟုတ်အချို့သောအခြား nonmating-related နှိုးဆွဖို့တွေကပေါ်ကနေမဟုတ်ခဲ့, ငါတို့ဟော်မုန်း-ကုသအမျိုးသမီးထိတွေ့ခဲ့ပြီးသော nonmating အထီးထုတ်လုပ်ပြီး, ဒါပေမယ့် copulate ခွင့်မပြု။ ဤရွေ့ကားယောက်ျားΔFosBသော induction လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်မလူမှုရေးသို့မဟုတ် nonmating တွေကိုတုန့်ပြန်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအကြံပြု, olfaction-နယ်ပယ်တွင်ထိန်းချုပ်မှုတိရစ္ဆာန်များ၏သီးခြားအစု (ပုံ။ 2a) နဲ့နှိုင်းယှဉ်ΔFosBအဆင့်ဆင့်မကွာခြားချက်ပြသခဲ့သည်။
အဆိုပါ NAc အတွက်ΔFosB၏ Overexpression sucrose စားသုံးမှုတိုးပွါး
ရက်သတ္တပတ်များစွာΔFosB၏တည်ငြိမ်သောစကားရပ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်ဗိုင်းရပ်စ် -mediated overexpression system ကိုအသုံးပြုခြင်း (Zachariou et al ။ , 2006) (ပုံ - ၃ က) ကျွန်ုပ်တို့သည် )FosB ၏မြင့်မားသောအဆင့်ကိုသြဇာသက်ရောက်စေပြီးအထူးသဖြင့် NAc ကိုပစ်မှတ်ထားသည်၊ အပြုအမူ (ပုံ။3ခ) ။ ကျနော်တို့ပထမ ဦး ဆုံးတစ် sucrose စားသုံးမှု pretest (AAV-GFP,3± 6.49 ml; AAV-osFosB, 0.879 ± 6.22 ml; n ကို = 0.621 / အုပ်စုသည်; p> 15) နဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုမတိုင်မီအခြေခံ sucrose အပြုအမူရှိကွောငျးကိုအာမခံထား။ ခွဲစိတ်ကုသပြီးသုံးပတ်အလိုတွင် osFosB ဖော်ပြမှု ∼0.80 for အတွက်တည်ငြိမ်သောအခါတိရိစ္ဆာန်များကိုခွဲစိတ်ကုသမှုဆိုင်ရာ sucrose test ကိုပေးခဲ့သည်။ AAV-osFosB အုပ်စုသည် AAV-GFP ထိန်းချုပ်သောအဖွဲ့များထက်သိသိသာသာပိုမိုယိုစိမ့်မှုကိုသောက်သည် (ပုံ - ၃ ခ) ။ အုပ်စုနှစ်ခုအကြားရေစားသုံးမှုပမာဏ (AAV-GFP၊ ၀.၉၂ - ၀.၀၁၁ မီလီမီတာ; AAV-osFosB၊ ၀.၉၅ - ၀.၇၇ မီလီမီတာ; n = 10 / group; p> 3) အကြားရေစားသုံးမှုပမာဏ၌ကွဲပြားမှုမရှိပါ။ sucrose မှတိကျတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ NAc အတွက်ΔFosB၏ Overexpression သဘာဝကဆုလာဘ်အပြုအမူ၏ရှုထောင့်ကိုထိန်းညှိ။ AAV-ΔFosBဆေးထိုးပြီးနောက်, immunohistochemistry အားဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိΔFosBထုတ်ဖော်နှစ်နိုင်ငံဗိုင်းရပ်စ်-mediated မျိုးရိုးဗီဇလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်ဥပမာအားဖြင့် NAc ပစ်မှတ် site ၏တစ်ဦး, ပုံဖော်။ ခ, AAV-GFP-ထိုးသွင်းထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါတိုးမြှင့် sucrose စားသုံးမှုအတွက် NAc ရလဒ်များကိုအတွက် AAV-ΔFosB၏ Injection (t ကို (28) = 2.208; * p = 0.036; ဎ = 15 / အုပ်စုသည်) ။ အလားတူပင် 10 လိင်နုံထိန်းချုပ်မှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ရက်သတ္တပတ်, sucrose စားသုံးမှုတိုးပွါး (t ကို (14) = 2.240; * p = 0.042; ဎ = 7-9) ။ (နှင့်လျော့နည်းသွား postejaculation ကြားကာလတစ်လမ်းကြောင်းသစ်အတွက်ရလဒ်တွေကိုက c, ΔFosB overexpression GFP ထိန်းချုပ်မှု (ဎ = 30-2.145;; * p = 0.04 t ကို (15) = 17) နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်လိင်နုံတိရိစ္ဆာန်များအတွက်သုတ်ရည်လွှတ်ရောက်ရှိရန်လိုအပ် intromissions ၏နံပါတ်လျော့ကျ t ကို (30) = 1.916; #p = 0.065; ဎ = 15-17) ။
အဆိုပါ NAc လွှမ်းမိုးမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ΔFosB၏ Overexpression
Next ကိုကျနော်တို့ NAc အတွက်ΔFosB overexpression နုံများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိတိရစ္ဆာန်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထိန်းညှိခြင်းရှိမရှိဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ (ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းအဖြစ် www.jneurosci.org မှာရှိနိုင်ပါဖြည့်စွက်ဇယား S1, ကိုကြည့်ပါ) AAV-ΔFosB-နှင့် -GFP-ကုသအတွေ့အကြုံရှိတိရိစ္ဆာန်များအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ parameters တွေကိုများတွင်မဆိုကွဲပြားခြားနားမှုကိုမတှေ့ပေမဲ့, နုံတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ΔFosB၏ overexpression သိသိသာသာကိုပထမဦးဆုံးလိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူအတွေ့အကြုံသုတ်ရည်လွှတ်ရောက်ရှိရန်လိုအပ် intromissions ၏နံပါတ်လျော့နည်းသွား (ပုံ။ 3c) ။ ပထမဦးဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ (ပုံ။ 3c) ပြီးနောက်ΔFosBအုပ်စုသည်များအတွက် postejaculatory ကြားကာလတစ်ဦးကျဆင်းခြင်းများအတွက်လမ်းကြောင်းသစ်လည်းရှိခဲ့သည်။ ဆနျ့ကငျြ, အဘယ်သူမျှမကွဲပြားမှု (ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းအဖြစ် www.jneurosci.org မှာရှိနိုင်ပါဖြည့်စွက်ဇယား S1, ကိုကြည့်ပါ) တောင်ပေါ်, intromissions, ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုဟာနုံသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံရှိသတ္တဝါများထဲတွင်သုတ်ရည်လွှတ်ဘို့အ latency အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ဒီအကြောင်းမှာတစ်ဦးချင်းစီအုပ်စုတွင်တောင်ပေါ်၏နံပါတ်၌မြင့်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ၏ဖြစ်နိုင်သည်ပေမယ့်အလားတူမရှိခြားနားချက်သည် intromission အချိုး [intromissions / (တောင်ပေါ်၏ intromissions အရေအတွက် + နံပါတ်) အရေအတွက်] ကိုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။
လိင်အတွေ့အကြုံကို sucrose စားသုံးမှုတိုးပွါး
ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးဆုလာဘ်တစ်ခု sucrose အရက်သောက်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံနှစ်ဦးစလုံးပြီးနောက် NAc အတွက်ΔFosBအဆင့်ဆင့်အတွက်တိုးနှင့်ΔFosB overexpression လွှမ်းမိုးမှုအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုကိုတွေ့သောကြောင့်, ကဆုလာဘ်တယခင်ထိတွေ့မှုသိသိသာသာအခြားမှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုထိခိုက်ခြင်းရှိမရှိလေ့လာစူးစမ်းဖို့အကျိုးစီးပွားခဲ့သည် ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံမီ, နုံတိရိစ္ဆာန်များကျပန်းအခြေအနေများထိန်းချုပ်သို့မဟုတ်လိင်မှတာဝန်ကျတယ်။ ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့တိရစ္ဆာန်များထို့နောက် 8-10 ရက်သတ္တပတ်ကျော်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေများနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သည်။ ငါးရက်ကနောက်ဆုံးလိင် session တစ်ခုအပြီး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တဦးတည်းရေပုလင်းနှင့် sucrose တဦးအကြားတစ်ဦး 30 မိ Two-ပုလင်းရွေးချယ်မှုပါရာဒိုင်းအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့လိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များထိန်းချုပ်မှု (ပုံ။ 3b) ထက်သိသိသာသာပိုပြီး sucrose သောက်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရေမရှိသောစားသုံးမှုနှင့်အတူကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့သည်လိင်ကြုံတွေ့နှင့်ထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များအကြားခြားနားချက် (; လိင်ကြုံတွေ့, 1.21 ± 0.142 ml; ထိန်းချုပ်ရေး, 1.16 ± 0.159 ml ဎ = 7-9; p = 0.79), အကျိုးသက်ရောက်မှု sucrose မှတိကျတဲ့ကြောင်းအကြံပြု။
ဒီလေ့လာမှုကလိင်နှင့် sucrose နှင့်ဆက်စပ်သောသဘာဝကဆုလာဘ်အပြုအမူတွေအတွက်ΔFosB၏အခန်းကဏ္ဍကို elucidating အတွက်စာပေအတွက်ယခင်ကွာဟမှုဆိုထားသည်။ ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးကသဘာဝဆုလာဘ်မှနာတာရှည်ထိတွေ့ပြီးနောက်, ΔFosBအဆိုပါ NAc အတွင်းစုဆောင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်အရေးကြီးဦးနှောက်ဆုလာဘ်ဒေသထွက်ထားကြ၏။ ဒီအလုပျ၏အရေးပါသောအင်္ဂါရပ်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေး Paradigm မှတစ်ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်၎င်းတို့၏အပြုအမူအတွက်တိရိစ္ဆာန်များကိုတစ်ဦးရွေးချယ်မှုပေးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ဤသည်ΔFosBအဆင့်ဆင့်အပေါ်တစ်စုံတစ်ရာသက်ရောက်မှုအကျိုးကို၏ဆန္ဒအလျောက်စားသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်သောခံခဲ့ရကြောင်းသေချာစေရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆုလာဘ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအကြားတစ်ဦးရွေးချယ်မှုတစ်ခု inverted ဦး-shaped ထိုး-တုံ့ပြန်မှုကွေး, ဆုတ်ခွာပြီးနောက်ထိခိုက်တုံ့ပြန်မှုများနှင့်အလွန်အကျွံစားသုံးမှု: အဆိုပါ sucrose မော်ဒယ် (။ ပုံ 1) အခြား sucrose စားသုံးမှုမော်ဒယ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါစွဲတူသောအပြုအမူ၏ရှုထောင့်ပြသသည်။ ဒါကမော်ဒယ်လည်းထိုကဲ့သို့သောနေ့စဉ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသကြားမော်ဒယ် (Avena et al ။ , 2008) ကဲ့သို့သောအခြားမော်ဒယ်များအတွက်မသိမမြင်ရတိုးချဲ့ကိုယ်အလေးချိန်, ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာသဘာဝကဆုလာဘ်နှစ်ခုသော့ချက်အမျိုးအစားများ, sucrose နှင့်လိင်, အ NAc အတွက်နှစ်ဦးစလုံးတိုးΔFosBအဆင့်ဆင့်အကြောင်း, ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, တည်စေကြ၏။ ဤရွေ့ကားတိုးအနောက်တိုင်းချေနှင့် immunohistochemistry အားဖြင့်ကြည့်ရှုလေ့လာကြသည် ဟူ. ၎င်း, နှစ်ဦးစလုံးနည်းလမ်းများသုံးပြီးလေ့လာပရိုတိန်းထုတ်ကုန်အမှန်ပင်ΔFosBနှင့်မပြည့်အရှည် FosB, အ fosB ဗီဇ၏အခြားထုတ်ကုန်ကြောင်း insures ။ sucrose နှင့်လိင်အားဖြင့်ΔFosBများ၏ရွေးချယ်သော induction (နိဒါန်းကိုကြည့်ပါ) အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးလုံးဝနီးပါးအားလုံးအမျိုးအစားများနာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် NAc အတွက်ΔFosBများ၏ရွေးချယ်သော induction ဆင်တူသည်။ မှတ်စု၏, သို့သော် NAc အတွက်ΔFosBသော induction ၏ဒီဂရီမှာသဘာဝဆုလာဘ်တုံ့ပြန်ဒီနေရာမှာလေ့လာတွေ့ရှိသောလေ့လာရေးမူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်အဘို့မြင်ကြကြောင်းထက်သေးငယ်သည်: sucrose အရက်သောက်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမတူဘဲΔFosBအဆင့်ဆင့်အတွက် 40-60% တိုးထုတ်လုပ် အလွဲသုံးစားမှုအများအပြားမူးယစ်ဆေး (Perrotti et al ။ , 2008) နဲ့မြင်ပြီ severalfold သော induction ရန်။
ဤလေ့လာမှု၏ဒုတိယရည်မှန်းချက်မှာသဘာဝဆုလာဘ်-related အပြုအမူတွေအပေါ် NAc အတွက်ΔFosBသော induction ၏အလုပ်လုပ်တဲ့အကျိုးဆက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ဖြစ်တယ်။ မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုΔFosBပေါ်မှာငါတို့အရင်အလုပ်အများကြီးΔFosBစကားရပ် NAc နှင့် dorsal striatum ဖို့ပစ်မှတ်ထားသောသွေးဆောင် bitransgenic ကြွက်၏အသုံးပြုမှုကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ ဤရွေ့ကားΔFosB-overexpressing ကြွက် (နိဒါန်းကိုကြည့်ပါ) ကိုကင်းနှင့်အ opiates မှတိုးမြှင့်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်တိုးမြှင့်ဘီးပြေးနှင့်စားနပ်ရိက္ခာများအတွက်တုံ့ပြန်ဆာပပြသပါ။ ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ stably အထီးကြွက်များ၏ပစ်မှတ်ထားဦးနှောက်ဒေသများတွင်ΔFosB overexpress တစ်ဦးထက်ပိုသောမကြာသေးမီကတီထွင်ဗိုင်းရပ်စ်-mediated ဗီဇလွှဲပြောင်းမှုစနစ်အသုံးပြုသော (Zachary et al ။ , 2006) ။ ကျနော်တို့ထိန်းချုပ်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာΔFosB overexpression ယင်းအုပ်စုနှစ်စုအကြားရေစားသုံးမှုမကွဲပြားမှုနှင့်အတူ sucrose စားသုံးမှုတိုးပွားလာကြောင်းဤနေရာတွင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ငါတို့သည်လည်းΔFosBလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသြဇာလွှမ်းမိုးပုံကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ကျနော်တို့ NAc အတွက်ΔFosB overexpression လိင်နုံတိရိစ္ဆာန်များအတွက်သုတ်ရည်လွှတ်ဘို့လိုအပ် intromissions ၏နံပါတ်လျော့ကျကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဤသည်တောင်ပေါ်မှာမြားတှငျပွောငျးလဲ, intromission, ဒါမှမဟုတ်သုတ်ရည်လွှတ် latency အပါအဝင်နုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအခြားကွဲပြားမှုနှင့်အတူကိုက်ညီခြင်းမရှိပါ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ΔFosB overexpression လိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမဆိုအသှငျအပွငျမထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။ ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ NAc အတွက်ကိုင်တွယ်များ၏စွမ်းရည်ကိုကဒီဦးနှောက်ဆုလာဘ်ဒေသ (။ Hull နဲ့ Dominguez, 2004 Balfour et al, 2007) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထိန်းညှိသောကြီးထွားလာသက်သေအထောက်အထားပေးထားအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး intromissions အရေအတွက်ထဲမှာΔFosB-သွေးဆောင်ကျဆင်းခြင်းဟာ NAc အတွက်ΔFosB overexpression နဲ့နုံတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ပိုပြီးအတွေ့အကြုံရှိတိရစ္ဆာန်များလိုပဲအလုပ်လုပ်တယ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုတိုးမြှင့်ရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်ဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်, ထပ်ခါတလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏စမ်းသပ်မှုအတွက်တိရိစ္ဆာန်များကိုသုတ်ရည်လွှတ် (Lumley နှင့် Hull, 1999) ရောက်ရှိဖို့နည်းပါးလာ intromissions လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ΔFosB overexpression အတူ postejaculatory ကြားကာလတစ်ဦးကျဆင်းခြင်းများအတွက်လမ်းကြောင်းသစ်လည်းပိုပြီးလိင်လှုံ့ဆျော, အတွေ့အကြုံရှိယောက်ျား (Kippin နှင့်ဗန် der Kooy, 2003) တွင်လေ့လာတွေ့ရှိအပြုအမူတွေကိုထင်ဟပ်။ အတူတကွဤတွေ့ရှိချက်နုံတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ΔFosB overexpression နုံတိရိစ္ဆာန်များကိုပိုပြီးအတွေ့အကြုံရသို့မဟုတ်လိင်လှုံ့ဆော်မှုတိရိစ္ဆာန်များတူအောင်နေဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူလွယ်ကူချောမွေ့စေမည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါတို့အတွေ့အကြုံရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ΔFosB overexpression ၏သိသာထင်ရှားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစောငျ့ရှောကျခဲ့ပါဘူး။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများပိုမိုရှုပ်ထွေးအပြုအမူလေ့လာမှုများ (ဥပမာ, အခြေအနေများအရပျကိုဦးစားပေး) ပိုကောင်းΔFosB၏ဖြစ်နိုင်ခြေအကျိုးသက်ရောက်မှုများခွဲခြားမှုလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်သဘာဝဆုလာဘ်တစ်ခုနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်အခြားတစ်ခုအပေါ်အပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုနောက်ဆုံးလေ့လာခဲ့သည်။ အတိအကျပြောရရင်၊ အရင်လိင်အတွေ့အကြုံက sucrose စားသုံးမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ထိန်းချုပ်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံရှိသောတိရိစ္ဆာန်များသည်သန္ဓေတားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြသသော်လည်းလိင်အတွေ့အကြုံရှိသောတိရိစ္ဆာန်များသည်ရေကိုမသောက်ဘဲများစွာသကြားဓာတ်ကိုသောက်ကြသည်။ ၎င်းသည်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောတွေ့ရှိချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခင်ဆုတစ်ခုမှယခင်ထိတွေ့မှုကအခြားအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်လှုံ့ဆော်မှု၏အကျိုးကျေးဇူးကိုပိုမိုမြင့်တက်စေနိုင်သည်ဟုအကြံပြုသည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမျှဝေထားသောမော်လီကျူးအခြေခံ (ဥပမာ - osFosB) ဆုသည်ထိခိုက်လွယ်မှုရှိနိုင်သည်။ ဤလေ့လာမှုနှင့်ဆင်တူသည်ယခင်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သည့်အမျိုးသမီးဟမ်းစ်များသည်ကိုကင်း (Bradley and Meisel, 2001) ၏အပြုအမူဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများကိုပိုမိုထိရောက်စွာပြသခဲ့သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များသည် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်တိုက်နယ်အတွင်းရှိပလတ်စတစ်အယူအဆကိုထောက်ခံသည်။ လက်ရှိရရှိနိုင်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများသည်အတိတ်ကဆုလာဘ်ဖော်ထုတ်ခြင်းများပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဤနေရာတွင်တင်ပြထားသောအလုပ်သည်အလွဲသုံးစားမှုဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးများအပြင်သဘာဝအကျိုးကျေးဇူးများသည် NAc ရှိ osFosB အဆင့်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကိုသက်သေအထောက်အထားများဖြစ်သည်။ အလားတူစွာ၊ ဤ ဦး နှောက်ဒေသရှိ osFosB ကိုအလွန်အကျွံထုတ်ဖော်ခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုများအတွက်ယခင်ကလေ့လာခဲ့သည့်အတိုင်း၊ သဘာဝအကျိုးကျေးဇူးများကိုတိရိစ္ဆာန်၏အပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများကိုထိန်းညှိပေးသည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များက osFosB သည်ဆုလာဘ်ယန္တရားများ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ပိုမိုယေဘုယျအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သဘာဝအကျိုးကျေးဇူးများစွာတွင်တွေ့မြင်ရသည့် Cross-sensitization ကိုပြေလည်အောင်ကူညီနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များအနေဖြင့် NAc တွင် osFosB ပါဝင်မှုသည်မူးယစ်ဆေးစွဲမှု၏အဓိကကျသောအချက်များသာမကသဘာဝအရအကျိုးကျေးဇူးများကိုအတင်းအကျပ်စားသုံးခြင်းပါဝင်သည့်သဘာဝစွဲလမ်းမှု၏ရှုထောင့်များကိုပါဖျန်ဖြေစေနိုင်သည်။
•ဤအလုပ်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်အမျိုးသား Institute ၏အမျိုးသားအင်စတီကျုမှ Schizophrenia နှင့်စီးပွားပျက်ကပ်အတွင်းသုတေသနများအတွက်အမျိုးသားမဟာမိတ်အဖွဲ့ကနေထောက်ပံ့ငွေကထောက်ခံခဲ့သည်။
•ပေးစာယူအထက်ပါလိပ်စာမှာကားလို့စ်အေ Bolanos မှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
အာရုံကြောသိပ္ပံ 2008-0270 / 6474 / 08-2810272 $ 06 / 15.00 များအတွက်•မူပိုင်ခွင့်©0Society က
1 ။ Avena မိုင်,
2 ။ Rada P ကို,
3 ။ Hoebel BG
သကြားစွဲလမ်းများအတွက် (2008) အထောက်အထား: ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း, အလွန်အကျွံသကြားစားသုံးမှု၏အမူအကျင့်များနှင့် neurochemical ဆိုးကျိုးများ။ neuroscience Biobehav ဗြာ 32: 20-39 ။
1 ။ Balfour ME,
2 ။ ယု L ကို,
3 ။ Coolen LM
1 ။ Barrot M က,
2 ။ Olivier JD,
4 ။ DiLeone RJ,
6 ။ Eisch AJ,
7 ။ Impey S က,
8 ။ မုန်တိုင်း DR,
10 ။ ယဉ် JC,
11 ။ Zachary V ကို,
12 ။ Nestler EJ
နျူကလီးယပ်အတွက် (2002) CREB လှုပ်ရှားမှုစိတ်ခံစားမှုလှုံ့ဆော်မှုမှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုများ shell ကိုထိန်းချုပ်မှု Gates accumbens ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 99: 11435-11440 ။
2 ။ Wallace DL,
3 ။ Bolaños, CA,
4 ။ ဂရေဟမ် DL,
5 ။ Perrotti LI,
6 ။ Neve RL,
7 ။ Chambliss H ကို,
8 ။ ယဉ် JC,
9 ။ Nestler EJ
စိုးရိမ်စိတ်နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် CREB အားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများစတင်များ (2005) စည်းမျဉ်းဥပဒေ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 102: 8357-8362 ။
1 ။ Bradley KC,
2 ။ Meisel RL
1 ။ ဘရောင်း JR,
2 ။ သငျတို့သ H ကို,
3 ။ Bronson RT ကို,
4 ။ Dikkes P ကို,
5 ။ Greenberg ME
(1996) ကိုချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇ fosB ချို့တဲ့ကြွက်တွေအတွက်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအတွက်တစ်ဦးကချွတ်ယွင်း။ cell 86: 297-309 ။
1 ။ Cenci MA
ပါကင်ဆန်ရောဂါ၏ကြွက်မော်ဒယ်အတွက် L-DOPA- သွေးဆောင် dyskinesia ၏ pathogenesis တွင်ပါဝင်ပတ်သက် (2002) ကူးယူအချက်များ။ အမိုင်နိုအက်ဆစ် 23: 105-109 ။
1 ။ Colby CR,
2 ။ Whisler K သည်,
3 ။ Steffen ကို C,
4 ။ Nestler EJ,
5 ။ ကိုယ်ပိုင် DW
DeltaFosB ၏ (2003) Striatal ဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့ overexpression ကင်းဘို့မက်လုံးပေးပိုကောင်းစေပါတယ်။ J ကို neuroscience 23: 2488-2493 ။
1 ။ Hull က EM,
2 ။ Dominguez JM
အထီးကြွက်များတွင် (2007) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ Horm ပြုမူနေ 52: 45-55 ။
ဦးနှောက်ထဲမှာကူးယူအချက် deltaFosB ၏ (1999) Expression ကိုကင်းမှ sensitivity ကိုထိန်းချုပ်သည်။ သဘာဝတရား 401: 272-276 ။
1 ။ Kippin TE,
2 ။ ဗန် der Kooy: D
(2003) ကို tegmental pedunculopontine နျူကလိယ၏ Excitotoxic ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နုံအထီးကြွက်များတွင်သုတ်ရည်ထိအယှက်များနှင့်အတွေ့အကြုံရှိအထီးကြွက်များတွင်သုတ်ရည်ထိ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုပိတ်ဆို့။ EUR J ကို neuroscience 18: 2581-2591 ။
1 ။ Lumley LA က,
2 ။ Hull က EM
တစ်ဦး D1999 ရန်နှင့် medial preoptic နျူကလိယထဲမှာသုတ်ရည်ထိ-သွေးဆောင် Fos ကဲ့သို့ immunoreactivity အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ (1) အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဦးနှောက် Res 829: 55-68 ။
1 ။ McDaid J ကို,
2 ။ ဂရေဟမ်အမတ်,
3 ။ Napier TC
(2006) သမ်ဖက်တမင်း-သွေးဆောင်ာင်း differential သည့်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေကဦးနှောက်၏ limbic circuit ကိုတလျှောက်လုံး pCREB နှင့် DeltaFosB ပွောငျးလဲ။ Mol Pharmacol 70: 2064-2074 ။
1 ။ Muller DL,
2 ။ Unterwald EM
(2005) D1 dopamine receptors ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမော်ဖင်းအကိုက်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်ကြွက် striatum အတွက် deltaFosB သော induction modulate ။ J ကို Pharmacol Exp Ther 314: 148-154 ။
1 ။ Nakabeppu Y ကို,
2 ။ Nathan D ကို
Fos / Jun ကမှတ်တမ်းလှုပ်ရှားမှုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ကြောင်း FosB ၏ (1991) တစ်ဦးကသဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ်ခြင်းကိုပုံစံ။ cell 64: 751-759 ။
1 ။ Olausson P ကို,
2 ။ Jentsch JD,
3 ။ Tronson N ကို,
4 ။ Neve RL,
5 ။ Nestler EJ,
6 ။ တေလာ JR
နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် (2006) DeltaFosB အစားအစာ-အားဖြည့်ဆာပအပြုအမူများနှင့်လှုံ့ဆျောမှုထိန်းညှိ။ J ကို neuroscience 26: 9196-9204 ။
နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ deltaFosB ၏ (2004) induction ။ J ကို neuroscience 24: 10594-10602 ။
2 ။ Bolaños, CA,
3 ။ Choi KH,
4 ။ Russo SJ,
5 ။ Edwards က S နဲ့,
6 ။ Ulery PG,
7 ။ Wallace DL,
8 ။ ကိုယ်ပိုင် DW,
10 ။ Barrot M က
(2005) DeltaFosB psychostimulant ကုသမှုပြီးနောက် ventral tegmental ဧရိယာ၏ posterior အမြီးအတွက် GABAergic ဆဲလ်လူဦးရေအတွက်စုဆောင်း။ EUR J ကို neuroscience 21: 2817-2824 ။
1 ။ Teegarden SL,
2 ။ ဘေးလ် TL
အစားအသောက် preference ကိုနှင့်စားသုံးမှုအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု (2007) အကျိုးသက်ရောက်မှုလက်လှမ်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု sensitivity ကိုအပေါ်မှီခိုဖြစ်ကြသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 61: 1021-1029 ။
1 ။ Werme M က,
2 ။ Messer ကို C,
3 ။ Olson L ကို,
4 ။ Gilden L ကို,
5 ။ Thorén P ကို,
6 ။ Nestler EJ,
7 ။ Brené S က
(2002) DeltaFosB ဘီးပြေးထိန်းညှိ။ J ကို neuroscience 22: 8133-8138 ။
1 ။ Zachary V ကို,
2 ။ Bolanos, CA,
3 ။ Selley DE,
4 ။ Theobald: D,
5 ။ Cassidy အမတ်,
6 ။ Kelz ကို MB,
7 ။ Shaw-Lutchman T က,
8 ။ Berton အို
9 ။ sim-Selley LJ,
10 ။ Dileone RJ,
11 ။ Kumar ကတစ်ဦး,
(2006) မော်ဖင်းအကိုက်အရေးယူအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် DeltaFosB ဘို့တစ်ခုမရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ နတ် neuroscience 9: 205-211 ။